Cajiibka Waxay bixisaa Xaqiiqada Anti-Spam Solutions Comments for WordPress
Helitaanka akhristayaasha badan blog-gaaga ama boggaaga waa riyo ah baqshiishe kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la kulmi kartaa faallooyin badan oo ku saabsan bloggaaga WordPress. Waxaa jira habab iyo qalabyo badan oo aad isticmaali karto si aad ula dagaallanto spam ee WordPress.
Hoos waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qalabkan oo ay soo qoreen khabiirkii ugu horreeyay ee ka yimid Semt , Oliver King - red counter stools with backs.
1. Furo Akismet
Qalabkani waa plugin WordPress ah oo yimaada marka ay horeyba horey u sii xirneyd. Qof kasta oo isticmaala WordPress, uma baahnid inaad soo dejiso plug-ka. Waxay horey u soo gali kartaa guddiga, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa wax dhaqaajiya. Marka aad firfircoon tahay, waxaad heshaa furaha API kaas oo aad u isticmaali karto dhinacyo badan oo ka mid ah blogga. Fikradda Akismet waxay tarjumaysaa dhammaan faallooyinka ku jira bloggaaga waxaadna ka saartaa kuwa u eg sida spam. Marar kale, faallooyinka joogtada ah waxay ku heli karaan filterka spam. Waxay noqon kartaa mid lagama maarmaan ah marwalba inay soo gudbiso faallooyinka si ay u arkaan in ay dhici karto in e-mail muhiim ah.
2. Samee Ilaalinta Honeypot
Mid ayaa xakameyn kara xayeysiiska spam isagoo isticmaalaya farsamadan. Waxay ku lug leedahay qulqulinta isbaarada si ay u aqoonsadaan naftooda. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto WP Spam Fighter. Laga soo bilaabo halkan, waa in aad dhaqaajiso plugkani..Laga soo bilaabo menu-ka, waxaa jira ikhtiyaarka lagu hirgelinayo ilaalinta Honeypot. Doorashadan waxaa ku jira foomka qarsoodiga ah ee goobaha faallooyinka kuwaas oo kaliya loo arki karo bots. Maaddaama lafdhabarta spam buuxinaayo dhammaan meheradaha bannaan, waxay horay isu soo dhigi karaan.
3. Ha u isticmaalin "falanqaynta raac" links
Mararka qaar, milkiilaha bogagga ayaa isticmaala "faallooyin" lama xiriirin si ay goobta uga dhigaan meelo badan oo taraafig ah. Natiijo ahaan, fursaddani waxay soo jiidataa faallooyin badan oo fara badan oo kordhinaysa tarjumadda. Xaaladaha qaarkood, qalabyada lagu ogaanayo spam ma heli karaan mawduucaan, taas oo ka dhigaysa mid sii xumaynaysa. Qaar ka mid ah dadka isticmaala macquulka ah ayaa sidoo kale ka heli kara faallooyin ay ku qoranyihiin. Kuwani waxay isku xiri karaan si ay u sameeyaan faallooyinka. Waxaa sidoo kale jira plugins ah kuwaas oo la wadaagi karo casiir xiriiriya iyada oo loo marayo faallooyinka. Markaad isticmaalaynin plugins kuwaas oo la wadaagaya mawduucan, waxaad ka hortagi kartaa dhacdooyin badan oo ah ereyada spamka.
4. Isticmaalka xaqiijinta Captcha
WordPress waxay leedahay lahjad WP-reCAPTCHA. Kaalintani waa muuqaal u baahan hal si aad ugu suurtogasho qaybta faallooyinka. Captchas waxay isticmaalaan xirfado qaarkood oo u baahan Tilmaamaha Nidaamka Sirdoonka Xoogga (HIT) sida guji sawirro leh shey gaar ah. Qaadashadu waxay leeyihiin kartida ay kala soocaan bini-aadanka dhabta ah. Qalabkani wuxuu aad ugu adkeynayaa dadka isticmaala inay soo gudbiyaan faallooyin. Waxaad xakameyn kartaa xayeysiiska spam adigoo isticmaalaya reCAPTCHA maxaa yeelay waa mid deg deg ah oo hufan ee xayiraadda faallooyinka.
Spam waxay noqon kartaa mid aad u adag oo badanaa, waxay dadka u lumisaa dambiilayaasha mujtamaca oo leh niyad xumo. Xaaladaha qaarkood, weerarrada spam ee guuleysta waxay sidoo kale soo bandhigi karaan bogagga shabakadaha maamul ee koox khubaro ah kuwaas oo samayn kara wax kasta oo ku haboon baahidooda. Dayacaaddani waxay noqon kartaa mid ka mid ah hababka ay site u lumin karto wax walba. Waxaad ku ogaan kartaa oo iska ilaalin kartaa spam adigoo isticmaalaya qalabyada kor ku xusan. Nidaamyada, iska dhaga tirinta farriimaha spam ayaa kaa caawin kara inaad wax badan kaydsato. Mid ayaa ka saari kara shabakada internetka ee spam bot iyo in ay gaaraan shaqooyin badan oo ku saabsan faalooyinka spam.